Araka ny fanazavan’ity farany hatrany dia efa nalefa any amin’ny CSIA (Commission spéciale indépendante pour l’Amnistie) eo anivon’ny Fitsarana tampony (Cour supreme) ireo atontan-taratasy 1 300 teo am-pelatanan’ny CFM momba ny famotsoran-keloka (amnistie), ny réparation de carrière, ary ny indemnisation.
Momba ny fanonerana (indemnisation) dia tsy maintsy misy didim-panjakana, hoy izy, milaza ny pitsopitsony momba izany, efa nomena ny minisiteran’ny Fitsarana ny antotan-taratasy. Efa lasa natolotry ny minisiteran’ny Fitsarana ny minisiteran’ny Fitantanam-bola izany.
Momba ny fanonerana arak’asa indray (réparation de carrière), ho an’ireo sivily sy miaramila, ho an’ireo izay nahatsapa fa noho ny safidy politika dia voaelingelina ny fisondrotana arakasan’izy ireo (avancement), dia eo ampanaovana fanadihadiana ny CFM, hoy hatrany ny fanazavany.
Marihina fa 3 taona aorian’ny nipetrahany amin’ny toeran’ny CFM no fara-fandraisana ny antotan-taratasy. Ny fanonerana arak’asa sisa azo raisina amin’izao fotoana izao, ankoatr’izay efa tapitra.